ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): Android ဖုန်းကို Root လုပ်နည်းနှင့် + Android ဖုန်းမှာ Myanmar Fonts ထည့်နည်း
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:30 PM
maung July 6, 2012 at 9:44 PM
bada os သုံး samsung wave y ကို မြန်မာဖောင့်နှင့်ကီးဘုတ် ဘယ်လိုသွင်းရတယ်ဆိုတာ post အနေနဲ့တင်ပေးပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
aungmoe August 19, 2012 at 3:06 AM
အစ်ကို ကျွန်တော့ ကိုလည်း ကူညီပါအုံး ကျွန်တော့ android 4.0.3 တရုတ် ဖုန်း တစ်လုံးဝယ်လိုက်တာ zawgyi one font ကို ထည့်လို့ ရတယ် keyboard လည်း ထည့် လို့ ရတယ် keyboard မှာ font ကို လည်း မြင်ရတယ် ရိုက်လိုက်တော့ ဘာစာ မှ ထွက်မလာဘူး ထူးခြားတာ က settings မှာ keyboard ရွေးဖို့ ပါတယ် font ရွေးဖို့ မပါဘူး font style ပါမလာဘူး keyboard အတွက် zawgyi font ရွေးပေးလို့ မရဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့ Root လို့ လည်း မရဘူး ကျွန်တော်ပဲ မ Root တက်လို့လားမသိဘူး Root tool တွေ လည်း တော်တော် စုံနေပြီ ကျွန်တော် ၀ယ်လာတဲ့ ဖုန်း ကုပ္မဏီ website ကို ကြည့် လို့ရတယ် သူတို့ ကိုလည်း မေးလို့ ရတယ် သူတို့ ကို မေးတော့ play store က နေ plugin myanmar ( bumese ) ကို Install လုပ်လိုက်ပါလို့ ပြောတယ် အဲဒါ ကို Istall လုပ်လိုက်တယ် ပြီးတော့ AnySoftKeyboard+android ကို ထက်ပြီး Install လုပ်လိုက်တော့ အဲဒီ keyboard မှာ ကျ plugin myanmar ဆိုတာ ကို ရွေးပြီး အမှတ်ပေးလို့ ရတယ်ဗျ အောင်မြင်ပြီ ဆိုပြီး စာ ရိုက်ဖို့ keyboard ကို လည်း ဖွင့်လိုက်ရော့ ဘာစာ မှ မပဲ keyboard က အမဲ တုန်းလေး တွေ ပဲ ဖြစ်နေတယ် ကူညီပါအုံးဗျာ website မှာ သွားပြီးကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် http://www.hkv.com.my/index.php?dispatch=categories.view&category_id=165 အဲဒီ လင့် က MID-x5 ဆိုတဲ့ ဖုန်းပါပဲ ကျွန်တော် အရမ်း စိတ်ညစ်သွားပြီ android ဖုန်းဆိုရင် မြန်မာ စာ ထည့်ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြား နဲ့ ပဲ ၀ယ်လိုက်တာ လက်တွေ့ ကျတော့ အတော်လေး ကို ဒုက္ခ ရောက်နေပါပြီဗျာ
Unknown August 21, 2012 at 8:46 PM
အထက်က နည်းက ဖုန်းအတွက် သီးသန့် လား? android tablet4အတွက်ရော နည်းက ထူတူပဲလား?
Pyae Phyo (MMiTD) August 21, 2012 at 9:08 PM
အတူတူပါဘဲ။ Android အတွက်ပါ။
Sony ray မှာရော အဆင်ပြေနိုင်မလားဗျ.. font ရော updateေ၇ာ root လုပ်ဖို့ ရော ပေါ့ဗျာ..တခုခု လွဲသွားမျာ စိုးလို့ပါ ..ကျေးဇူးပါ..
Lover Heart October 16, 2012 at 6:05 PM
xperias ကို version 4.0.4 တင်လိုက်တာမြန်မာfonts တွေကနဲနဲ လွဲနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Could you please arrange and help me root and myanmar font for HUAWEI C 8825 D,Version 4.0.4